Faah faahin:- Qasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhaxeeysa wasaaradda gaashaandhigga iyo kulliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi ayaa la sheegayaa in lagu weeraray gaadiid uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid oo maanta xilka si rasmi ah ula wareegay.
Qof naftii hallige ah ayaa gaari uu watay ku dhuftay gaari kale oo Cabdi Bile ah oo halkaasi maraayay, waxaana inta la xaqiijiyey qaraxaasi ku dhimatay ugu yaraan 15 ruux oo isugu jira dad shacab oo saarnaa gaari BL ah iyo askar ciidan, iyadoona dhaawaca uu intaasi ka badan yahay, sida ay inoo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah.
Dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa waxaa loola cararay Isbitaallada ku yaalla magaalada Muqdisho, wuxuuna qaraxaan kusoo beegmayaa xilli labo cisho ka dib, markii madaxweyne Farmaajo uu isbedel ku sameeyay taliyaasha ciidamada dowladda, kuna dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-shabaab.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, waxayna sheegeen inay dileen saraakiil iyo askar badan oo ku sugneyd goobta uu qaraxa ka dhacay.
Ugu dambeyntii, qaraxaan ayaa kusoo beegmaya xilli wasaaradda gaashaandhiga ay maanta ka dhacday xaflad ay kasoo qeyb-galeen taliyaal ciidan iyo madax kale oo uu xilka kula kala wareegayay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid.